Vol. 12 DECEMBER, 1910. Tsia
MISY ny sain'olombelona ao am-boalohany dia miteraka voajanahary ary tsy misy ezaka ny fisainan'ny toerana ho avy na ny fahasambarana. Ny eritreritra dia naseho isan-karazany. Amin'ny teny anglisy dia adika amin'ny endrika lasa hoe lanitra.
Ny fiala-tany hita any amin'ireo harambato sy toeram-pandevenana ny mponina taloha tany Amerika dia manaporofo ny fisainany ny lanitra. Ny tsangambato, tempoliny ary soratra hita amin'ny metaly sy ny vato ao amin'ny sisan'ny sivilizasiona taloha any Amerika dia manaporofo ny finoana any an-danitra, nataon'ireo mpanamboatra ireny sivilizasiona ireny. Ireo tompon-tany amin'ny ony Nile dia nanondraka ny obelisks, piramida ary ny fasana, ary namela azy ireo ho mangina, vavolenta mijoro ho vavolombelona hanambara ny fahasambarana ho an'ny olona. Ny hazakazaka any Azia dia manolotra fijoroana ho vavolombelona marobe ao amin'ireo lava-bato sy fasana, ary literatiora iray izay mifanaraka amin'ny famaritana ny toe-piainan'ny olona ho avy sambatra ho vokatry ny asany tsara eto an-tany. Talohan'ny nananganana ny finoana kristiana tany an-danitra dia natsangana tany amin'ny tanin'i Eropa, nisy faribolana sy tsangambato ary crypts no nampiasain'ny olona mba hitondrana ny tsodranon'ny lanitra ho azy raha mbola ety an-tany, ary mba hampifindrany mba hidirany ao amin'ny haben'ny lanitra. ny fahafatesana. Amin'ny fomba voalohany na voafetra, na amin'ny fanamorana na fanararaotan'ny kolontsaina, ny foko tsirairay dia naneho ny finoany ny fanjakan'ny lanitra ho avy.
Ny firazanana rehetra dia manana angano sy angano fotsiny izay milaza amin'ny fomba fanaony na toerana tsy marina, izay niainan'ny hazakazaka tam-pifaliana. Tamin'ity toe-piainana tany am-boalohany ity dia nomen'ny olona ambony kokoa izy ireo, izay natahorany tamim-pahatafintohinana na fahatahorana na fanajana ary noheverin'izy ireo ho tompony, mpitsara na raim-pianakaviana, miaraka amin'ny fahatokisan'ny zanaka. Ireo kaonty ireo dia milaza fa ny fitsipika dia nomen'ny mpamorona na ny olona ambony kokoa, ka ny fiainana araka izany, ny hazakazaka dia tokony hanohy ny fiainana amin'ny fahasambarany tsotra, fa ny valiny mahatsiravina dia hitranga amin'ny fialana amin'ny fiainana voatokana. Ny tantara tsirairay dia milaza amin'ny fomba fombany ny tsy fankatoavan'ny hazakazaka na ny maha-olona, ​​ary avy eo ny fahasahiranana, loza, ary loza, miaraka amin'ny fanaintainany sy ny alahelo vokatry ny tsy fahalalana sy ny tsy fankatoavan'ny razana.
Hevi-diso sy angano ary soratra masina milaza fa ny firazanan'olombelona dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny ota sy alahelo, tratry ny aretina ary marary efa antitra izay miafara amin'ny fahafatesana, noho io fahotan'ny razambe taloha io. Fa ny firaketana tsirairay avy amin'ny fomba samy izy ary ny toetoetran'ny olona noforoniny, dia nanambara mialoha ny fotoana iray noho ny fankasitrahan'ny mpamorona na ny fanesorana ny hadisoana natao, ny lehilahy dia handositra ny nofinofisin'ny fiainana eto an-tany ary hiditra ao toerana izay tsy ahitana ny fanaintainana sy ny fijaliana ary ny aretina ary ny fahafatesana, ary izay rehetra miditra dia hiaina ao anatin'ny fahasambarana tsy voafehy sy tsy voafehy. Izany no fampanantenan'ny lanitra.
Angano sy angano dia milaza sy manoratra ny fomba tokony hiainan'ny olona sy ny zavatra tokony hataony alohan'ny hahazoany na nanolorany azy ny fahaizan'ny lanitra. Mifanaraka amin'ny fiainana sy ny toetran'ny firazanany, ny olona dia voalaza fa hahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra izy na hahazo izany amin'ny alalan'ny herim-po amin'ny ady, ny fandresena ny fahavalo, ny famoizany ny ratsy fanahy, ny fifadian-kanina, ny fananana tokana, ny finoana vavaka na fivalozana, amin'ny fanaovana asa soa, amin'ny fanamaivanana ny fahorian'ny hafa, amin'ny fanalan-tena sy ny fiainam-panompoana, amin'ny fahatakarana sy ny fandresena ary ny fifehezana ny filana, ny fironana sy ny faniriany tsy mety, amin'ny fisainana tsara, hetsika tsara ary fahalalana, ary ny lanitra dia mihoatra na mihoatra ny tany na tokony ho eto an-tany amin'ny fotoana ho avy.
Ny finoana kristiana momba ny toetran'ny olona taloha sy ho avy dia tsy mitovy amin'ny an'ny finoana hafa sy ny taloha. Araka ny fampianarana kristiana dia teraka ny olona ary velona amin'ny ota, ary voalaza fa ny fanamelohana ny ota dia fahafatesana, saingy mety mandositra ny fahafatesana sy ny sazy hafa amin'ny ota izy amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra amin'ny maha-mpamonjy azy.
Ny fanambarana ao amin'ny Testamenta Vaovao momba ny lanitra dia marina sy tsara. Ny fanambarana teolojika momba ny lanitra teolojika dia marobe tsy mitombina, fifanoherana ary tsy fahitana fohy. Mamono ny saina izy ireo ary manara-maso ny saina. Ny lanitra teôlôjia dia toerana voahazavana amin'ny famirapiratra marevaka, ary feno fatratra sy voaravaka zavatra lafo vidy eto an-tany; toerana iray izay mihira hira fiderana hatrany hatrany amin'ny hiran'ny mozika; izay tondraka ny arabe misy ronono sy tantely ary ao ny sakafo bebrosial; izay misy rivotra dia mamofona manitra fofona manitra sy ditin-may manitra; izay fifaliana sy fifaliana no mamaly isaky ny mikasika azy ary ny mpiray tanàna na ny eritreritry ny lehilahy mihira sy mandihy ary mitsangantsangana ary miverina mankamin'ny hosom-bavaka sy fiderana, mandritra ny mandrakizay tsy manam-petra.
Iza no maniry ny lanitra toy izany? Inona no eritreritry ny olona hanaiky ny lanitra mora sy mahatsiravina raha apetraka aminy? Ny fanahin'ny olona dia tokony ho toy ny adala, trondro, na trondro, tsy misy dikany. Tsy misy olona maniry ny teolojia teolojika ankehitriny ary tsy misy teolojia, izay mitory azy io. Tiany hitoetra eto amin'ity tany voaozona ity izy fa tsy ho any amin'ny lanitra be voninahitra izay nomaniny sy nanorenany ary nametrahany lanitra lavitra.
Inona ny lanitra? Tsy misy izany na tsia? Raha tsy izany dia maninona no mandany fotoana amin'ny famafazana ny tena amin'ny fancies? Raha misy ary misy vidiny mandritra izany, dia tsara indrindra ny hahatakatra azy ary hiasa ho azy.
Manantena fahasambarana ny saina ary miandrandra toerana na fanjakana iray izay hahitana ny fahasambarana. Io toerana na fanjakana io dia aseho amin'ny teny hoe lanitra. Ny zava-misy rehetra izay manana ny firazanana rehetra amin'ny fotoana rehetra izay noeritreretina sy ninoany ny lanitra sasany, dia ny zava-drehetra izay mbola mieritreritra sy mijery ny lanitra, dia porofo fa misy zavatra ao an-tsaina izay manery ny fisainana. ary izany zavatra izany dia tsy maintsy mitovy amin'ny alehany, ary hanohizany sy hitarika ny eritreritra mankany amin'ny foto-keviny mandra-pahatratrarana sy hahatanterahany izany tanjona izany.
Misy angovo be ao an-tsaina. Amin'ny fisaintsainana sy hiandrandra lanitra aorian'ny fahafatesana, ny olona iray dia manangona hery ary manangana araka ny filamatra. Ity hery ity dia tsy maintsy manana ny heviny. Ny fiainana an-tany tsy mahazatra dia tsy misy fotoana ahafahana maneho hevitra toy izany. Ny hetaheta sy ny hetaheta toy izany dia mahita ny heviny taorian'ny fahafatesana tany an-danitra.
Ny saina dia teratany avy any amin'ny faritra falifaly, tontolo ara-tsaina, izay tsy fantatra ny alahelo, ny ady ary ny aretina. Tonga any amoron-tsolin'ny tontolo ara-batana mahatsiravina, ny mpitsidika dia ampitahaina, manangom-bolo, ho gaga amin'ny fieritreretana, fitaka sy fitaka amin'ny endrika sy loko ary fihetseham-po. Manadino ny fireneny sambatra ary mitady fahasambarana amin'ny alàlan'ny tsapan'ny sainim-tsaina, miezaka izy ary miady ary avy eo alahelo ny mahita ny fanatonana ireo zavatra ireo, tsy ny fahasambarana izany. Taorian'ny fitsidihana ny barter sy ny tsy fifanarahana, ny fifandirana, ny fahombiazana ary ny fahadisoam-panantenany, taorian'ny fahatakarana ny fanaintainana sy ny fanamaivanana noho ny hafaliana tsy hita maso, dia nandao ny tontolo ara-batana ny mpitsidika ary niverina ho any amin'ny firenena niainany falifaly, ary nitondra traikefa niaraka taminy.
Miondrika indray ny saina ary miaina ary mandalo avy amin'ny tontolo ara-batana mankany amin'ny azy manokana, ny tontolon'ny saina. Ny saina lasa mpivahiny efa zatra mitsidika matetika, nefa mbola tsy nandefa feo na oviana na oviana na oviana ny olan'ny fiainana an-tany. Nanana traikefa be ny tombony kely amin'ny olona kely ny olombelona. Avy amin'ny fonenany mandrakizay izy handany andro iray eto amin'izao tontolo izao, avy eo mandalo indray mba hiala sasatra, fa ho avy indray. Mbola hitohy izany mandra-pahitany ny tenany, ilay mpamonjy azy, izay hamolavola ny bibidia izay mandoka azy, izay hanala ny hevi-diso izay masiaka aminy, izay hitari-dàlana azy amin'ny faharavana mahatsiravina manerana ny efitra midradradradra sy ao amin'ny tany. izay mahalalany tena, tsy voasarona amin'ny saina ary tsy voatahiry amin'ny ambiansy na fakam-panahy ary tsy hita amin'ny valin'ny hetsika. Mandra-pahitany ny mpamonjy azy ary mahalala ny fipetrahany dia afaka miandrandra lanitra, fa tsy hahafantatra izany na hiditra any an-danitra izy raha tsy maintsy tonga tsy fantatra amin'ny tontolo ara-batana izy.
Ny saina dia tsy mahita ny zava-dehibe amin'ny lanitra eto an-tany, ary na oviana na oviana io dia tsy mifanaraka amin'ny fotoana fohy sy ny manodidina azy ary ny fihetseham-pony sy ny fahatsapana ary ny fahatsapana an-tsitrapo. Mandra-pahatongan'ny saina ho mahalala sy mahalala ireo rehetra ireo, dia tsy hahalala ny lanitra eto an-tany izany. Koa ny saina dia tsy maintsy esorina amin'ny fahafatesana amin'ny tontolo ara-batana, hiditra ao amin'ny toetry ny fahasambarana ho valisoa ho azy, hiaina mifanaraka amin'ireo idealy niandrandrany azy, sy navotsotra tamin'ny fahoriana izay niaretan'izy ireo sy nandosirany ireo fakam-panahy izay niadiany, sy mankafy ny asa tsara izay nataony ary ny sendikà sahaza notadiaviny.
Aorian'ny fahafatesana dia tsy ny olona rehetra no mankany an-danitra. Ireo lehilahy izay nieritreritra sy niasa dia nandany ny zavatra momba ny fiainana ara-batana, izay tsy mihevi-tena na miahy ny tenany momba ny fanjakana ho avy aorian'ny fahafatesana, izay tsy manana idealy afa-tsy ny fahafinaretana ara-batana na asa, izay tsy manana eritreritra na faniriana ho amin'ny maha-Andriamanitra ankoatry ny ao anatin'izany dia tsy hanana lanitra izy ireo rehefa maty. Ny sasantsasany ao an-tsaina izay an'ity kilasy ity, saingy tsy fahavalon'ny olombelona, ​​dia mijanona ao anaty faritra manelanelana toy ny ao anatin'ny torimaso lalina, mandra-pisehon'ny vatana ara-batana voaomana sy vonona ho azy ireo; avy eo izy ireo dia miditra ao aorian'izany ary manohy ny fiainana sy ny asa araka izay notakin'ny fiainany teo aloha.
Mba hidirana any an-danitra dia tsy maintsy mieritreritra sy hanao izay mahatonga ny lanitra ny olona. Ny lanitra dia tsy vita taorian'ny fahafatesana. Ny lanitra dia tsy vokatry ny hakamoana ara-tsaina, tsy manao na inona na inona, amin'ny fahatafintohinana, ny fanalanonana ny fotoana, na ny manonofinofy fa rehefa mifoha, ary tsy misy tanjona. Ny lanitra dia atao amin'ny alàlan'ny fieritreretana ny an'ny hafa sy ny fitsipi-pitondran-tena ara-panahy sy ny fitsipi-pitondran-tena amin'ny hafa ary ahazoana miasa mafy amin'ny tanjona toy izany. Afaka mankafy ny lanitra irery izay naoriny ihany ny olona iray; ny lanitra hafa tsy mba andaniny.
Aorian'ny fahafatesan'ny vatany, ny saina dia manomboka dingana iray hanafoanana ny filana sy ny faniriana ara-nofo, ny fahazotoana ary ny filàna ary ny filan'ny nofo. Ireo no zavatra manintona sy mamitaka ary mamitaka sy mamitaka sy mampisafotofoto azy ary niteraka fanaintainana sy fijaliana izany fony teo amin'ny fiainana ara-batana ary manakana azy tsy hahafantatra ny tena fahasambarana. Ireo zavatra ireo dia tsy maintsy esorina sy zaraina amin'ny saina, mba hananan'ny saina fialan-tsasatra sy fahasambarana, ary hiaina ny fotokevitra niriany, fa tsy nahavita tamin'ny fiainana ara-batana.
Ny lanitra dia ilaina amin'ny ankamaroan'ny saina fa ny torimaso sy ny fialan-tsasatra ho an'ny vatana. Rehefa nesorina sy nesorin'ny saina daholo ny faniriana ara-tsaina sy ny eritreritra dia hiditra any an-danitra izay nomaniny taloha ho azy.
Io lanitra io aorian'ny fahafatesana dia tsy azo lazaina amin'ny toerana iray na amin'ny toerana eto an-tany. Ilay tany fantatra amin'ny olombelona amin'ny fiainana ara-batana dia tsy hita na mahatsapa any an-danitra. Ny lanitra dia tsy voafetra amin'ny refy refesin'ny tany.
Izay miditra any an-danitra dia tsy fehezin'ny lalàna mifehy ny hetsika sy ny fihetsiky ny vatan'ny olona eto an-tany. Izay any an-danitra, dia tsy mandeha na mandehandeha ary tsy mamindra amin'ny hozatra. Tsy mihinana sakafo matsiro izy, ary tsy misotro voamadinika. Tsy maheno na manamboatra mozika na tabataba amin'ny valiha vita amin'ny hazo na metaly izy. Tsy hitany ny vatolampy, ny hazo, ny rano, ny trano, ny fitafiana, satria misy izy ireo eto an-tany, sady tsy mahita ireo endrika hita maso sy ny endrik'ireo olona rehetra eto ambonin'ny tany. Vavahady perla, arabe jaspy, sakafo mamy, zava-pisotro, rahona, seza fiandrianana fotsy, lokanga ary serba mety ho hita eto an-tany, tsy hita an-danitra izany. Aorian'ny fahafatesana dia samy manorina ny lanitrany ny tenany avy ary miasa ho toy ny maha-mpandraharaha azy manokana. Tsy misy ny fivarotana sy ny varotra na ny vokatra avy amin'ny tany, satria tsy ilaina izany. Tsy atao any an-danitra ny raharaham-barotra. Ny asa aman-draharaha rehetra dia tsy maintsy atrehana an-tany. Tokony ho hita eto an-tany ny fety acrobatic sy ny fampisehoana mahavariana, raha toa ka efa hita maso. Tsy misy mpamorona toy izany nalamina amin'ny fitantanana ny lanitra ary tsy hisy olona ho liana amin'ny fampisehoana toy izany. Tsy misy asa aman-draharaha politika any an-danitra, satria tsy misy ny toerana tokony hamenoana azy. Tsy misy antokom-pivavahana na fivavahana any an-danitra, satria samy efa nandao ny fiangonany tety an-tany. Ary tsy ho hita endrika modely sy karazan'olona fiaraha-monina manokana, satria tsy navela any an-danitra ny fehiloha, ny landy ary ny lamba nitaingina ny fiaraha-monina ary ny hazo dia tsy azo ovana. Ny volony sy ny lambany ary ny fofona ary ny haingo rehetra toy izany dia tsy maintsy esorina alohan'ny hidiran'ny olona any an-danitra, satria ny olona rehetra any an-danitra dia misy toa azy ireo ary mety ho fantatra toy ny misy azy ireo, tsy misy fitaka sy fiambenana lainga.
Taorian'ny nanesorana ny vatana ara-batana, ny saina izay tonga nofo dia nanomboka nandroaka sy nanafaka ny tenany tamin'ny kibon'ny fanirian'ny nofo. Rehefa hadinony io ka lasa tsy mahalala azy ireo dia mifoha tsikelikely ny saina ary miditra ao amin'ny tontolon'ny lanitra. Ny zavatra lehibe mankany an-danitra dia fahasambarana sy eritreritra. Tsy misy manaiky izay hisakana na hanelingelina ny fahasambarana. Tsy misy fifanolanana na fikorontana mety hiditra any an-danitra. Ny tontolon'ny fahasambarana, ny tontolon'ny lanitra, tsy dia lehibe loatra, mahatalanjona na mahatalanjona tokoa ka mahatonga ny saina hahatsapa ho tsy misy dikany na tsy misy toerana. Ary ny lanitra dia tsy miraharaha, tsotra, tsy manelingelina na mampihetsi-po loatra hamela ny saina hihevitra ny tenany ho ambony sy tsy mahomby amin'ny fanjakana. Ny lanitra dia tonga ao an-tsaina izay miditra, izay rehetra omena an'izany saina izany (tsy ny eritreritra) no tena fahasambarana lehibe indrindra sy feno indrindra.
Ny fahasambaran'ny lanitra dia amin'ny alalan'ny eritreritra. Ny eritreritra no mpamorona sy mpihaingo sy mpanao ny lanitra. Fanomezana eritreritra ary fandaminana ny fanendrena rehetra any an-danitra. Manaiky ny hafa rehetra mandray anjara any an-danitra ny eritreritra. Ny eritreritra dia mamaritra izay atao, sy ny fomba fanaovana azy. Fa ny eritreritra izay mahasambatra ihany no azo ampiasaina amin'ny fananganana ny lanitra. Ny fahatsapana dia afaka miditra ao an-dohan'ny saina iray fotsiny amin'ny ambaratonga fa natao mba hahazoana ilay fahasambarana amin'ny eritreritra. Saingy ny hakingan-tsaina ampiasaintsika dia mihatsara kokoa noho ny fahatsapana ny fiainana eto an-tany ary afaka miasa ihany izy ireo rehefa tsy mifanohitra amin'ny eritreritry ny lanitra izy ireo. Ny fahatsapana na saina amin'ny nofo dia tsy manana anjara na toerana any an-danitra. Koa inona avy ireo fahatsapana raikitra ireto? Izy ireo dia tonga saina amin'ny alàlan'ny saina mandritra ny fotoana fohy sy mandritra ny fotoana, ary tsy maharitra.
Na dia tsy hita na mahatsapa tena ny tany tahaka ny ety an-tany, ny tany dia mety ary ho hitan'ny saina rehefa an-tsaina ny fisainan'ny saina, ho fanatsarana ny idealy iray, dia manatsara ny tany. Saingy ny tany any an-danitra dia tany tsara indrindra ary tsy hitan'ny saina ao amin'ny tena toe-batany misy ny fahasahiranana ateraky ny vatan'ny vatana. Raha ny eritreritry ny olona dia miahiahy amin'ny fanamboarana sy hanamboarana ny faritra sasany eto an-tany, amin'ny fanatsarana ny toe-piainana voajanahary ao amin'ny tany sy ny fampodiana azy ireo hahasoa ny soa ho an'ny tenany sy ny hafa, na amin'ny fanatsarana ny vatana. ny toe-tsaina sy ny toe-tsaina amin'ny fomba rehetra, dia ny tany na ny toerana misy ny tany izay niheverany ny tenany, dia ho tonga any an-danitra any an-danitra, amin'ny fahatanterahany lehibe indrindra, amin'ny fisainany, ary tsy misy ireo sakana sy sakantsakana izay ahitany azy dia nifanditra tamin'ny fiainana ara-batana. Ny fisaintsainana dia maka ny toeran'ny kajiny fandrefesana sy ny halaviran'ny fanjavonana ao anaty fisainana. Araka ny eritreretiny manokana sy amin'ny tany, dia ho toy izany koa ny hahitany azy any an-danitra; fa raha tsy misy ny fisasahana miasa ary tsy misy ny fisainana, satria ny eritreritra izay manatanteraka ny fanatanterahana dia miorina eto an-tany ary miaina any an-danitra fotsiny. Ny fiheverana any an-danitra no fifaliana sy vokatry ny fisainana natao teto an-tany.
Ny saina dia tsy mikasika ny lohahevitra mikasika ny lokomotra raha tsy hoe mifandraika amin'ny filatsahany ny lohahevitra raha tsy eto an-tany ary noheverina ho tsy liana be loatra amin'ny tenany. Ny mpamorona izay nieritreritra ny eto an-tany dia niahiahy tamin'ny fiara na fitaovam-pifamoivoizana mba hahazoana vola hivoaka amin'ny famoronana azy, raha tonga any an-danitra izy, dia hanadino ary tsy mahalala tanteraka ny asany eto an-tany. Raha toa ny mpamorona iray izay ny tsara indrindra dia ny manamboatra fiara na fitaovana toy izany mba hanatsarana ny toe-piainan'ny vahoaka na mba hanamaivanana ny fahasahiranana tsirairay, miaraka am-panahin'olombelona, ​​ary na izany aza, raha ny eritreritr'izy ireo no manamboatra. ary ny fanamboarana ny famoronana miaraka amin'ny tanjona hanehoana vinavinan-javatra vitsivitsy - raha tsy ny fisainany no tsy misy ny lehibena na ny fanapahan-kevitry ny manam-bola fa ny asa dia eritreretina fa hanana anjara any an-danitra ny mpamorona ary ho tanterany amin'ny fomba feno izay rehetra mbola tsy nahalala teto an-tany.
Ny fihetsiketsehana na fitsangatsanganana an-tsaina ao amin'ny tontolon'ny lanitra dia tsy atao amin'ny fandehanana mafy na ny lomano na ny manidina, fa amin'ny eritreritra. Ny eritreritra dia ny fomba izay hiasan'ny saina avy any amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa. Izany eritreritra izany dia mety hitranga amin'ny fiainana ara-batana. Ny lehilahy iray dia azo ampitaina any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany. Mijanona eo amin'izay misy azy ny vatany, fa ny eritreriny dia mivezivezy amin'izay tiany ary miaraka amin'ny haingana. Mora ho azy ny mitondra tena ao New York mankany Hong Kong, satria avy any New York ka hatrany Albany, ary tsy takiana intsony. Ny lehilahy iray izay mipetraka eo amin'ny sezany dia mety tsy hisaina intsony ary hamerina ny toerana lavitra izay nisy azy ary mety hiaina toe-javatra manan-danja indray. Sweat dia mety hiseho eo amin'ny handriny rehefa manao asa be loatra izy. Mety ho miloko ny endriny rehefa lasa izy taloha, mankahala ny sasany, na mety mitodika any amin'ny arofenitra izy rehefa mandalo loza maro, ary mandritra ny fotoana kelikely dia tsy ho fantany ny vatany. sy ny manodidina azy raha tsy hoe mitsabaka sy mahatsiaro azy izy, na mandra-piverina an-tsaina ho amin'ny vatany eo amin'ny seza.
Rehefa mety mihetsika sy mihetsika indray ny olona iray dia mieritreritra ireo zavatra niainany tamin'ny vatana ara-batana nefa tsy fantany ny vatany, ny saina, koa dia afaka mihetsika ary hiaina ao an-danitra araka ny asany sy ny eritreritra tsara indrindra. raha mbola ety an-tany. Saingy ny eritreritra dia ho voahilikilika amin'izay rehetra manakana ny saina tsy ho sambatra. Ny vatana ampiasain'ny saina hiaina fiainana eto an-tany dia ny vatana vatana; ny vatana ampiasain'ny saina hahatsapa ny fahasambarany any an-danitra dia vatany izay noheverina. Ny vatana vatana dia mifanentana amin'ny fiainana sy ny hetsika eo amin'ny tontolo ara-batana. Ity vatana mieritreritra ity dia noforonin'ny saina mandritra ny fiainana ary maka endrika aorian'ny fahafatesana ary maharitra tsy mihoatra ny vanim-potoana. Izany vatana izany no mieritreritra ny any an-danitra. Ny vatana saina dia ampiasain'ny saina hiaina ao amin'ny tontolony any an-danitra satria ny tontolon'ny lanitra dia avy amin'ny eritreritra, ary natao eritreritra, ary ny vatana fisainana dia mihetsika ho voajanahary ao amin'ny tontolony any an-danitra ary toy ny vatana amin'ny vatana ara-batana. izao tontolo izao. Mila sakafo ny vatana ara-batana, hitazomana ao amin'ny tontolo ara-batana. Mila saina koa ny saina mba hitazomana ny vatany any an-danitra, fa ny sakafo kosa tsy azo ara-batana. Ny sakafo ampiasaina dia ny eritreritra ary ny eritreritra izay nampientam-po raha tao amin'ny vatana iray ny saina fony ety an-tany. Raha mbola namaky sy nieritreritra ary nanorina tsara ny asany ny lehilahy fony izy teto an-tany, dia efa nanomana ny sakafony any an-danitra izy. Ny asa sy eritreritra any an-danitra no hany sakafo iray azon'ny saina ao amin'ny tontolony any an-danitra.
Ny saina dia mety hahatsapa resaka sy mozika any an-danitra, fa amin'ny alàlan'ny fisainana fotsiny. Ny hiran'ny fiainana dia hiaraka amin'ny hiran'ny gadona. Fa ny hira dia noforonin'ny sainy ary araka ny fotokevitra efa azy teto an-tany. Ny mozika dia avy any amin'ny tontolon'ny lanitra eran-tsaina hafa, raha mifanaraka.
Tsy mikasika ny eritreritra hafa na zavatra any an-danitra ny saina, rehefa mifandray amin'ny vatana hafa eto an-tany ny zavatra ara-batana. Ao an-danitra, ny vatan'ny saina, izay vatan'ny saina, manohina ny vatana hafa amin'ny eritreritra. Ny olona mahalala ny fifandraisany amin'ny nofo fotsiny amin'ny alalan'ny fitaovana hafa na amin'ny fanaka nofo amin'ny nofo dia tsy hankasitraka ny fifaliana izay azon'ny saina avy amin'ny fikasihan'ny eritreritra. Ny fahasambarana dia tsapa, saika avy amin'ny alàlan'ny eritreritra. Ny fahasambarana tsy ho takatry ny saina amin'ny nofo amin'ny nofo. Ny lanitra dia tsy toerana manintona na toe-javatra izay tsy voafetran'ny saina tsirairay ao an-tampon'ny lanitra tsy misy dikany. Ny hermits, recences ary metaphysician izay nieritreritra ny sainy fotsiny dia ny fieritreretana ny tenany samirery na miaraka amin'ny olana tsy misy dikany, dia mety hahafaly ny lanitra misy azy, kanefa mahalana ny saina iray na afaka manala ny zava-drehetra na ny saina hafa ao amin'ny tontolony.
Ny lanitra izay onenan'ny olona aorian'ny fahafatesana dia ao anatin'ny rivo-piainan'ny olona. Izany no nanodidina azy ary tao no niainany nandritra ny fiainany ara-batana. Tsy takatry ny sainy ny toe-tsaina, fa tonga saina izy taorian'ny fahafatesana, ary tsy avy amin'ny habakabaka, fa toy ny lanitra. Tsy maintsy mandalo aloha Izy, mitombo ivelan'ny, ny toe-tsainy ara-tsaina, izany hoe, mandalo any amin'ny afobe, alohan'ny hidirany any an-danitra. Mandritra ny fiainana ara-batana, mijanona ao anatin'ny toe-tsaina ara-tsaina ny eritreritra izay manorina ny lanitra taorian'ny fahafatesana. Izy ireo, amin'ny ankamaroany, tsy miaina. Ny lanitra dia ao anatin'ny fampandrosoana, miaina sy fanatanterahana ireo eritreritra tsara indrindra; fa isaky ny mandeha, tsarovy fa ao amin'ny rivo-piainany izy. Avy amin'io habakabaka io no misy ny mikraoba izay ametrahana ny vatany manaraka.
Ny saina tsirairay dia manana sy mitoetra ao an-danitra an'ny tenany manokana, satria ny saina tsirairay dia miaina ao amin'ny vatany ara-batana sy amin'ny atmosfera ao amin'ny tontolo ara-batana. Ny saina rehetra any an-danitra dia samy misy ao anatin'ny tontolon'ny lanitra lehibe, mitovitovy amin'ny lehilahy ao anatin'ny tontolo ara-batana. Ny saina dia tsy mipetraka any an-danitra satria amin'ny toerana sy ny toerana eto an-tany ny olona, ​​fa ny saina kosa dia ao anatin'izany toe-javatra izany sy ny hatsaran'ny eritreriny. Mety hanidy ny tenany any an-danitra ao anatin'ny tontolon'ny lanitra lehibe ny saina ary tsy hifandray amin'ny eritreritra hafa toy ny kalitao na hery, toy ny lehilahy manalavitra ny tenany izao tontolo izao rehefa tsy misaraka amin'ny fiaraha-monina rehetra izy. Ny saina tsirairay dia mety handray anjara any an-danitra misy eritreritra hafa na miaraka amin'ny eritreritra hafa rehetra izay mitovy ny filàny ary mitovy amin'ny haavon'ny fisainany, mitovitovy amin'ny lehilahy eto an-tany misy ny firazanany miray feo sy mankafy ny fikambanam-panahy amin'ny eritreritra.
Ny tontolon'ny lanitra dia naorina sy noforonin'ny saina, fa ireo eritreritra ireo ihany no hahasambatra. Ny eritreritra toy izao: nandroba ahy izy, hamono ahy, hanendrikendrika ahy, nandainga tamiko izy, na, saro-piaro azy aho, mialona azy, mankahala azy, tsy mahay manao anjara any an-danitra. Tsy tokony hiheverina ny hoe toerana manjavozavo na fanjakana ny lanitra satria natao ho zavatra tsy azo antoka sy tsy misy antoka ilay izy raha ny eritreritry ny olona iray. Ny fahasambarana lehibe indrindra eto an-tany na dia kely aza dia avy amin'ny fisainany. Ny vola izay an'ny mpanjaka eto an-tany dia tsy mahita fahasambarana amin'ny alàlan'ny firaka volamena ananany fotsiny, fa amin'ny fisainany ny fananany sy ny fahefana vokariny. Ny vehivavy iray dia tsy mahazo ny hafaliany amin'ny fahasamihafana maro izay ampiasaina amin'ny make-up gown ary avy amin'ny fanamiana an'io gown io, fa ny fahasambarany dia avy amin'ny eritreritra izay manatsara azy sy ny eritreritra. handidy fankasitrahana avy amin'ny hafa izany. Ny hatsaran'ny artista dia tsy ao amin'ny vokatry ny asany. Ny eritreritra izay mipetraka ao aorian'izany fa tiany. Ny mpampianatra dia tsy finaritra loatra satria ny mpianatra dia afaka manao tsianjery ny fomba sarotra. Ny fahafaham-po omeny dia mitoetra ao an-tsaina fa takatr'izy ireo ary hampihatra izay tadidiny. Ny fahasambarana kely azon'ny olona ety an-tany, tsy takatry ny sainy fotsiny, fa tsy avy amin'ny fananana ara-batana na fahombiazana. Eto an-tany dia toa tsy takatry ny saina sy tsy misy fotony ny eritreritra, ary toa tena misy ny fananana. Any an-danitra, nanjavona ireo zavona, fa ny eritreritra no tena misy. Raha tsy misy endrika masiaka sy amin'ny fisehoana ary marina ny foto-kevitry ny eritreritra, ny saina dia tsy azo lazaina fa sambatra kokoa fa ny sain'ny olon-tsotra amin'ny alàlan'ny sainy fony ety an-tany.
Ireo rehetra izay tonga ao an-tsaintsika fony ety an-tany, na ireo izay niheverana ny eritreritsika mba hahatongavana amin'ny tsara, dia hieritreritra fa ho eo sy hanampy antsika hanaitra ny lanitra. Ka tsy azo esorina amin'ny lanitra ny sakaizany. Ny fifandraisana dia mety hotohizin'ny saina any amin'ny tontolon'ny lanitra fa raha ny fifandraisana dia toetra namboarina ary tsy amin'ny lafiny ara-batana sy ara-nofo. Tsy manana anjara any an-danitra ny vatana. Tsy misy fisainana momba ny firaisana na ny zavatra ataon'ny firaisana any an-danitra. Ny saina sasany dia miaina amin'ny vatana ara-batana, mampifandray matetika ny eritreritra hoe "vady" na "vady" amin'ny fihetsika ara-nofo, ary mety ho sarotra ho an'ny olona ny mieritreritra ny mpivady raha tsy mieritreritra ny fifandraisany ara-batana. Tsy sarotra ho an'ny hafa ny mieritreritra ny mpivady, satria ny mpiara-miasa miasa amin'ny lahasa iraisana na ho amin'ny fitiavana tsy tia tena fa tsy fitiavana. Rehefa misaraka amin'ny vatany ara-batana ny saina mirona sy miditra amin'ny tontolony any an-danitra, dia tsy hanana izany koa ny fisainana firaisana satria efa nisaraka tamin'ny vatany ara-nofo sy ny filan'ny nofo ara-nofo izany ary hodiovina amin'ny fihoarany. maniry.
Ilay reny izay toa tafasaraka amin'ny fahafatesana amin'ny zanany dia afaka mihaona azy any an-danitra indray, fa satria tsy mitovy amin'ny lanitra ny lanitra, dia toy izany koa ny reny sy ny zaza tsy hitovy amin'ny any an-tany. Ilay reny izay nihevitra ny zanany ho tombom-pitiavana fotsiny ihany, ary nihevitra io zaza io ho fananany manokana, dia tsy maniry an'izany zaza izany ary tsy afaka hanana azy miaraka aminy any an-danitra, satria ny fiheveran-tena feno fitiavan-tena toy izany dia ny vahiny any ivelany ary nisaraka tamin'ny lanitra Ny renim-pianakaviana izay nihaona tamin'ny zanany tany an-danitra dia samy manana ny toe-tsaina hafa amin'ny maha-izy izay tarihin'ny fisainany, noho ny reny tia tena dia miteraka ny zanany ara-batana, raha mbola eo amin'ny tontolo ara-batana izy. Ny eritreritry ny reny tsy tia tena dia fitiavana, fanampiana ary fiarovana. Ny eritreritra toy izany dia tsy rava na avelan'ny fahafatesana, ary ilay reny izay nanana eritreritra toy izany ho an'ny zanany raha mbola ety an-tany dia hanohy azy ireo any an-danitra.
Tsy misy ny sain'olombelona voafetra na tsy mifono amin'ny vatany ary ny fon'ny olombelona rehetra dia manana ny rainy any an-danitra. Izany saina izay nandao ny fiainana an-tany ka niditra ny lanitry ny lanitra, ary ny eritreritrao tsara indrindra nianteherana na niahiahy an'ireo izay fantany teto an-tany dia mety hisy fiantraikany ao an-tsain'ireo olona eto an-tany raha tonga ao an-tsaina ny fisainan'ny tany.
Tsy ny endriny sy ny habeny ny fisainan'ny zaza entin-dreny miaraka aminy any an-danitra. Tamin'ny fiainana ara-batana dia fantany ny zaza tamin'ny zaza, tahaka ny zaza tany am-pianarana, ary mety ho toy ny ray na reny. Nandritra ny fiasana rehetra amin'ny vatany ara-batana dia tsy niova ny fisainan'ny zanany. Ao an-danitra, ny fiheveran'ny renin'ny zanany dia tsy tafiditra ao amin'ny vatany. Ny zavatra ao an-tsainy ihany dia ny idealy ihany.
Samy hihaona amin'ny namany any an-danitra ny tsirairay avy fa fantany ireo namana eto an-tany. Eto an-tany dia mety manana fanjaitra na maso maso ny sakaizany, bokotra na orona tavoahangy ny sakaizany, vava toy ny serizy na sakoroka, na lovia na tsato-manga, loha vita amin'ny perla na loha toy ny bala, tarehy toa ny a hatchet na squash. Ny endriny dia mety ho an'ny hafa toa ny an'ny Apollo na satri. Matetika izy ireo no mivily sy ny saron-tava izay anaovan'ny namany eto an-tany. Fa ireo fikambanam-baraka ireto dia ho voaroaka raha mahalala ny sakaizany. Raha nahita ny sakaizany mandalo any an-tany izy dia ho fantany any an-danitra nefa tsy misy an'izany fierena izany.
Tsy rariny ny manantena fa tokony hahita na hanana zavatra any an-danitra isika rehefa manana azy ireo eto an-tany, na hahatsapa fa tsy mendrika ny lanitra raha tsy afaka manana azy ireo isika. Mahalana ny olona mahita ny zavatra misy azy ireo, fa araka ny fiheverany azy. Tsy takatry ny sainy ny hasarobidin'ny fananany. Ny zavatra toy ny zavatra ao aminy dia avy amin'ny tany ary hita amin'ny alàlan'ny taova ara-batana. Ny eritreritrao amin'ireto loha-hevitra ireto ihany no azo raisina ho any an-danitra ary ny eritreritra toy izany ihany no miditra any an-danitra izay hitondra anjara amin'ny fahasambaran'ny saina. Ary noho izany ny saina izay nieritreretan'ny tena teto an-tany dia tsy ho very na dia ny famoy izay tsy mahasoa amin'ny fahasambarany aza. Ireo izay tiantsika tety an-tany ary tiantsika izay tokony hahasoa antsika dia tsy hijaly satria ny hadisoana sy ny fahazarana tsy nentiny mieritreritra any an-danitra. Hankasitrahantsika azy ireo bebe kokoa isika rehefa afaka mieritreritra azy ireo tsy misy hadisoana ary raha mihevitra azy ireo ho idealy isika. Ny hadisoan'ny namantsika mifandona amin'ny lesoka ataontsika eto ambonin'ny tany, ary simba ny raharahan'ny fisakaizana. Saingy ny fisakaizana tsy misy kilema dia tsaratsara kokoa amin'ny tontolon'ny lanitra, ary fantatsika tsara kokoa noho izy ireo toy ny tamin'ny fisehoan'ny feta amin'ny tany.
Tsy mety amin'ny saina any an-danitra ny mifandray amin'ny olona iray eto an-tany, na ny momba izany eto an-tany hifandray amin'ny iray any an-danitra. Saingy ny fifampiresahana toy izany dia tsy tanterahana amin'ny famokarana zava-mitranga ara-tsaina, ary tsy avy amin'ny loharanom-panahy sy ny lazain'ny fanahy ratsy fa ny "tontolon'ny fanahy" na ny "fahavaratra." Ny eritreritra any an-danitra dia tsy ny "fanahy". io no lazain'ny fanahy ratsy. Ny tontolon'ny saina dia tsy ny tontolo ara-panahy na ny fararano amin'ny herin'ny maizina. Ny saina any an-danitra dia tsy miditra na miteny amin'ny vanin-taona mafana, ary tsy mihetsika ao an-danitra akory ny saina any an-danitra amin'ny fomba manara-penitra amin'ny herin'ny maizina. Raha niditra tao amin'ny tanety fahavaratra ny saina any an-danitra na niseho tamin'ny fanahy ara-panahy na naneho ny tenany tamin'ny endrika ara-batana ary nifandray tanana sy niresaka tamin'ny namany tamin'ny vatana vatana, dia tokony hahatsapa ny tany sy ny nofo ny saina. ary ny fanaintainana, ny fahoriana na ny tsy fahatomombanan'ireo nifanerasera taminy, ary ny tsy fitovian'ireo dia hanelingelina sy hanelingelina ny fahasambarana ary ny lanitra dia ho tapitra izany saina izany. Raha ny saina any an-danitra ny fahasambarany tsy ho voaelingelina; tsy ho fantatra na ny faharatsiana na ny lesoka na ny iharan'izany eto an-tany, ary tsy handao ny lanitrany mandra-pahatavin'ny fotoanan'ny lanitra.
Ny saina any an-danitra dia afaka mifandray amin'ny olona iray amin'ny tany amin'ny alàlan'ny eritreritra sy ny eritreritra fotsiny ary ny eritreritra sy ny fifandraisana toy izany dia natao ho an'ny fiozolomana sy ho tsara, fa tsy mba hanoro hevitra an'izay eto an-tany ny fomba hahazoana vola, na ny hanomezana fahafaham-po ny faniriany na manome fotsiny ny fampiononana fotsiny. Rehefa mifandray amin'ny olona iray eto an-tany ny saina any an-danitra, dia amin'ny alàlan'ny eritreritra tsy manavaka no manome fihetsika tsara. Mety, na izany aza, ny soso-kevitra dia mety hiaraka amin'ny eritreritry ny namana izay any an-danitra, raha izay no tadiavina dia mifandraika amin'ny toetra na amin'ny asa nataony teto an-tany. Rehefa ny eritreritry ny iray izay any an-danitra voasariky ny eritreritra ety an-tany dia tsy hanisy dikany akory ny eritreritra amin'ny toe-javatra rehetra. Ny fifampiresahana dia ho tanterahana irery. Mandritra ny fotoana misafotofoto ary ao anatin'ny toe-javatra mety, dia mety hampita ny heviny any an-danitra ny lehilahy eto an-tany. Saingy ny eritreritra toy izany dia tsy afaka manana fahazaran-dratsy eto an-tany ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny filamatra sy mifandraika amin'ny fahasambaran'ny saina any an-danitra, ary tsy misy ifandraisany amin'ny toetran'ny maty. Rehefa mihetsika ny saina any an-danitra sy ny saina eto an-tany, ny saina any an-danitra dia tsy hieritreritra ny fisianny olona hafa eto an-tany, ary tsy hieritreritra ny hafa iray hafa any an-danitra ny olona eto an-tany. Ny fifandraisana dia mety ho tonga raha tsy mifamadika ny saina, rehefa toerana, toerana, toerana, fananana, dia tsy misy fiantraikany amin'ny eritreritra ary rehefa eo an-tsaina ny fisainana. Amin'izay tsy olon-tsotra no tsy ambaka. Raha atao ny fiombonana toy izany dia tsy miseho ny fotoana sy ny toerana. Rehefa atao ny fampiononana toy izany dia tsy hidina ety an-tany ny saina, ary tsy miakatra any an-danitra akory ny olona. Ny fiombonan'ny eritreritra toy izany dia amin'ny alàlan'ny eritreritra avo kokoa amin'ilay olona ety an-tany.
Noho ny fahasamihafana eo amin'ny idealy sy ny kalitao na ny herin'ny eritreritra sy ny hetahetan'ny olombelona dia tsy mitovy ny olona rehetra any. Ny tsirairay dia miditra sy mahatsapa ary mankasitraka azy io ho fanatanterahana ny niriany hahazoana fahasambarana. Ny fahasamihafan'ny eritreritra sy ny hetahetan'ny olombelona dia niteraka ny fanehoana ny fanisana sy fitsofan'ireo lanitra samihafa izay ankafahan'ny olona aorian'ny fahafatesana.
Misy lanitra maro be izay misy saina. Na izany aza dia ao anatin'ny tontolon'ny lanitra iray daholo. Samy miaina any an-danitra ao anatin'ny fahasambarana izy ireo nefa tsy manelingelina ny fahasambaran'ny hafa. Ity fahasambarana ity dia raha toa ka refesina, amin'ny fotoana sy ny zavatra iainana eto an-tany, dia toa tsy misy farany mandrakizay. Amin'ny tena fitenin'ny tany dia mety ho fohy ihany. Ho an'izay any an-danitra dia haharitra mandrakizay ny vanim-potoana, izay tsingerin'ny traikefa na eritreritra feno. Fa ho tapitra ny fotoany, na dia toa tsy hisy farany aza ny farany any an-danitra ny farany fahasambarana. Ny fiandohan'ny lanitra dia toa tsy niseho tampoka na tsy nampoizina. Fiafarana sy fiandohana any an-danitra mihazakazaka, samy midika fa vita na manatanteraka ary tsy manenina na tsy mahagaga raha takatra eto an-tany ireo teny ireo.
Ny vanim-potoana araka izay nofaritan'ny eritreritra tsara sy niasa alohan'ny fahafatesana dia tsy ho ela na fohy, fa feno ary mifarana rehefa miala amin'ny fisasarana ny saina ary mandany sy mamarina ny eritreritra tsara izay tsy mbola tonga teto an-tany. ary avy amin'izany io fiheverana io dia mihamatanjaka sy mamelombelona hatrany amin'ny famelana sy manadino ireo fiahiahiana sy fanahiana ary fahoriana izay niainana teto an-tany. Fa any an-danitra, ny saina dia tsy mahazo fahalalana mihoatra noho ny teo an-tany. Ny tany no sehatry ny tolona sy ny sekoly izay ahazoana fahalalana, ary eto an-tany no tokony hiverenan'ny saina hamita ny fiofanana sy ny fianarany.
Ny famoahan-dahatsoratra amin'ny resaka Janoary dia ny momba ny Lanitra eto an-tany.